ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်အတွင်း CNF ငြိမ်းခေါင်းဆောင် Pu Zing Cung ၏ တာထွက်မိန့်ခွန်း - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Khonumthung»ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်အတွင်း CNF ငြိမ်းခေါင်းဆောင် Pu Zing Cung ၏ တာထွက်မိန့်ခွန်း
By admin on	 December 6, 2012 Khonumthung
ဒုတိယ အကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ခန့် ကလေးမြို့၊ တာဟန်း၊ Chin Baptist Association Hall တွင် ပထမဦး ဆုံး ချင်းလူထု မိန့်ခွန်းဖြစ်သည်။
ပရိသတ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျာကျန်းမာ၊ချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ မွေးရက် မြတ် မင်္ဂလာနေ့ရက် များနီးကပ်လာသည့်နည်း တူအယောက်ဆီ တိုင်း အပေါ် မှာ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင် ခြင်းများနဲ့အတူ အယောက်ဆီ တိုင်းရဲ့ နှလုံး သား ထဲ မှာ ခရစ်တော် မွေးဖွားနိုင် ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်း ပါ တယ်
ဒီလိုအခွင့်ကောင်းတွေချပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော် ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ ဒီလို CNF ဥက္ကဌရဲ့ အထူးခရီးစဉ်နဲ့ CNF ရဲ့ ငြိမ်း ချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ ကိုဒီနေရာ မှာ ရှိနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေက ကြိုဆိုကြတဲ့ အပေါ် ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားအထူးကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီလိုကြိုဆိုကြတာဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ကြိုဆိုခြင်းမဟုတ်သလိုအဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ကြိုဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားတွေနဲ့ ချင်းပြည်သူတွေ ရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ အခြေခံအခွင့် အရေးတွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိရေးနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုဖန်တည်းပိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့ မိမိတို့ ယူဆောင်လာတဲ့ သတင်းစကားတွေ အတွက် သာလျှင် ဒီမှာစုရုံးပြီးတော့ ကြိုဆိုကြတာဖြစ်တယ်လို့ မိမိတို့နားလည်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစိတ် ဓါတ်မျိုးနဲ့ ကြိုဆိုတာကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနာမကျန်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သေနိုင်တယ်။ စိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ အနားယူနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်အ ရေးရရှိရေး တိုက်ပွဲဟာ ရှင်သန်မြဲ၊ ရပ်တည်မြဲဖြစ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအမျိုး သားရေးရည်မှန်းချက်တွေအတွက် အယောက် တိုင်းမားမားမတ် မတ် ရပ်တည်ကြဖို့ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
ဒီနေ့မှာကျနော်တို့တတွေဟာ HERO တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ချင်းအမျုိုးသားတွေ၊ ချင်းပြည် သူတွေအ တွက် သူရဲကောင်း (HERO)တွေ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးတဲ့လူတွေရာချီရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဟာမှန် ကန်တဲ့ပြောင်းလဲမှု မဟုတ် ခဲ့လို့်ရှိရင် မနက်ဖြန်မှာ၊ လာမဲ့ အနာဂတ်မှာထောင်ချီတဲ့ သူရဲကောင်းတွေပေါ်လာမယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့ ရဲရဲကြီးပြောရဲ ပါတယ်။ဘာကြောင့် ဒီကနေ့ ဒီနေရာမှာ စုရုံးရောက် လာကြသလဲ?ဘာ့ကြောင့် ရန်ကုန် သွားပြီး တော့ ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်သလဲ? ဘာ့ကြောင့် အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြပြီး တော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ရေး လုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ? ဒါတွေအကြောင်းရင်းခံရှိပါတယ်။
ဒီကနေ့ မိမိတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာစစ်မှန် ခဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိပ္ပါယ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှသွေးတစက်အထွက်ခံချင်ကြ တာမဟုတ်ဖူး။ တိုင်းရင်း သား ညီအစ်ကိုအားလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေချင်ပါတယ်။ မိမိတို့ ချင်းအမျိုးသားဖြစ်မှုကို အာမခံချက်မရ မချင်း၊ မိမိတို့နယ် မြေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် မအုပ်ချုပ်နိုင်မချင်းစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရတယ် လို့ပြောလို့ ရမှာမဟုတ်ဖူး။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလမှာအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ အစိုးရကခေါ်ပါတယ်။
ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန် မဟုတ် ပါဘူး။ ခေတ္တာငြိမ်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတာ၊ လုပ်ဆောင် တာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး မဟုတ်ဖူး။
လွတ်လပ် မှုမရှိဘဲနဲ့၊ သူတပါးရဲ့ လက်အောက်မှာကျရောက်ပြိးတော့ ပျားရည်နဲ့ ပေါင်မုန့် နဲ့စားနေ တာထက် လွတ်လပ် မှု အပြည့်နဲ့ မြက်ခြောက် ကိုစားဖို့ ကျနော်တို့ရွေးရပါလိမ့်မယ်။ အရေးအကြီး ဆုံးကတော့ “အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး” ပါဘဲ။ပညာရှင်များကပြောကြပါတယ်။ “Unity is Strength” “စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အား”။ အင်္ဂလိပ်တွေကျတော့ “United we Stand, Divided we fall” စည်းလုံးညီညွတ် လို့ရှိရင်း အတူတကွ ရပ်တည်မည်။
စိတ်ဝမ်းကွဲပြားလို့ရှိရင်ကျဆုံးခြင်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအင် အားအရှိ ဆုံး လူမျိုးဟာချမ်းသာ တဲ့ တိုင်းပြည်မဟုတ်ဖူး၊ ပညာရှိတဲ့ လူတွေမဟုတ်ဖူး၊ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း အများကြီးရှိ လုိ့လဲမဟုတ်ဖူး။ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိတဲ့၊ ချစ်ချစ် ခင်ခင် နေတဲ့၊ စိတ်ဓိတ်ခြင်းတူတဲ့ လူတွေဘဲဖြစ်တယ်။ဒီဒုတိယ အကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေး ပွဲမှာပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေးတုန်းကမပြီးပြတ်သေး တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ ချင်းအမျိုးသားအရေးကိစ္စတွေ၊ စစ်တပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စတွေ၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကိစ္စတွေ ကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတိုင်းရင်းသားတခုလုံးပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဆီကိုဦး တည်မှာဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ ဟာ မြန်ဆန်နေပေမေလို့ သတိနဲ့ ကြို ဆိုကြဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ တန်းတူမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌါန်းခွင့် တွေကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး မ ရောက် ရှိသေးသရွှေ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အပြောင်း အလဲရောက်ရှိသေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ အဲဒီအထိရောက်ရှိနိုင်ရေး မှာအား လုံးရဲ့ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်မှု ဟာအထူး အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။